mar kale eeg jidkaaga;
in lagu baraarugo kakankeeda si loo ogaado caqabadaha haysta;
go'aanso kabashooyinka suurtagalka ah ee ficilka;
soo jeedi dariiqooyin aad ku dhaqmi karto oo aad fikradaada ku sawiri lahayd;
ka dhig jilayaasha kale ee wadadaada inay u hoggaansamaan habka muwaadinka ka qaybqaadashada.
MOOC Berri jidkayga ku martiqaado ardyada bilaabi mashruuc waayo, jidkooda beddelo. Ka dib toddobaad oo wacyigelin ah oo ku saabsan "dariiqa berrito" iyo caqabadaha jira, waxaan si wadajir ah u milicsan doonaa sida loo dhaqangelin oo ka mid ah soo jeedin la taaban karo Waddeena, anagoo helayna jilayaasheeda inay ku soo biiraan oo ay ku dhaqmaan sirta guud. MOOC Tani, aad nool oo la sawiray, waxa uu ku siinayaa buug-qoraal, HAWLGALLADU la taaban karo oo hakad cayaareed. Waxaa loola jeedaa cid kasta, iyada oo aan shuruudo looga baahnayn, oo danaynaya mustaqbalka jidkiisa.
Berri jidkayga Diisambar 19, 2021Tranquillus
READ Aasaaska maareynta mashruuca: Iibsasho
socdaKu taageer ardaydaada hanuuninta iyadoo ay ugu wacan tahay MOOCs
Talooyinka lagu bixiyo kaarka deynta ee laga dhaafay cashuurta iyo tabarucaada badbaadada bulshada
Shaqo ka eryis sababo dhaqaale awgood: khaladka loo shaqeeyaha oo ku hanjabaya tartanka shirkadda
Ku tababbar goobta shaqada
Shaqooyinka xiisadda: saxeexa jaantusyada horumarinta shaqada iyo xirfadaha qaybaha hilibka - charcuterie farshaxan iyo roodhida - macmacaanka farsamada